10 ka Kalluun ee ugu Qaalisan Adduunka 2022 Talooyin Maalmo Kiky
Bogga ugu weyn 10 Kalluunka Ugu Qaalisan Adduunka 2022 -ka
Maxaad ka taqaanaa kalluunka degaankaaga ama adduunka oo dhan? Miyaad la socotaa in dadka kalluunka adduunka ku nool ay ka badan yihiin 30,000 nooc? Waxaa jira qaar ka mid ah kalluunka ugu qaalisan adduunka hadda, gaar ahaan sanadka 2022, oo ka mid ah noocyada kala duwan. Iibinta midkood ayaa ku iibsan karta gaadhi raaxo leh oo riyooyinkaaga ah.
Kalluunku waa xayawaan biyo leh oo badiyaa ku nool biyaha. Waa xayawaan aad u qurux badan oo leh sifooyin iyo soojiidasho ballaaran.
Sidoo kale, dadku waxay ku raaxaystaan ​​cunista kalluunka sababtoo ah qiimaha nafaqada ee weyn. Guud ahaan, kalluunku waxa uu leeyahay kalooriyo badan iyo maaddo borotiin ah. Kalluunka saliidda leh iyo kalluunka cad, tusaale ahaan, waxaa aad ugu badan tamar iyo borotiin halka ay sidoo kale ku badan yihiin omega-3 fatty acids.
Hoos waxaa ku qoran qiimaha nafaqada ee kalluunka saliidda leh iyo kalluunka cad.
Nafaqo Whitefish Kalluun saliid leh
Tamarta (Kcal) 111 203
Barootiin (g) 23 23
Dufan (g) 1 12
Kalastarol (mg) 86 77
Fosfoor (mg) 267 307
Waxaa laga yaabaa inaad u aragto wax aan la rumaysan karin inuu jiro nooc kalluun ah oo qiimihiisu ku dhow yahay $ 430,000.
Kalluunkan ma aha oo kaliya kuwo qaali ah laakiin sidoo kale way adag tahay in la helo. Xitaa haddii aad rumaysan tahay inaad kaydin karto mid ka mid ah kalluunka ugu qaalisan, waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad mid iibsato maxaa yeelay waa gabaabsi.
Marka, maqaalkan, waxaad ku baran doontaa kalluunka adduunka ugu qaalisan sannadka 2022.
Japan Tuna: Kalluunka ugu qaalisan adduunka in la cuno
Tuna oo ka timid Japan ayaa ka mid ah kalluunka ugu qaalisan ee la iibsado. Si aad ugu raaxaysato saxanka, waa inaad bixisaa wadar ahaan $ 500. Kalluunkan ayaa ku habboon samaynta sushi ugu weyn.
Tuna ugu fiican ayaa laga soo saaraa Japan, hase yeeshee waa nooc aad halis u ah. Si gacan looga geysto ilaalinta kalluunka hadhay, dawladda Japan waxay soo rogtay xayiraad kalluumeysi.
In kasta oo miisaankeedu yahay kaliya 612 rodol, tuna Bluefin ah ayaa lagu iibiyay $ 3 milyan sannadka 2019; taasi waa qiyaastii $ 5000 halkii pound. Tani waxay qiyaas ahaan u dhigantaa dakhliga toddobaadka ee Japan.
XIDHIIDHKA: 16ka Agaasime ee ugu Mushaharka Badan Dunida | 2022
Waa maxay qiimaha tuna tuna oo qaali ah?
Yaraanta iyo qiimaha sare ee tuna bluefin waxaa loo aanayn karaa dhowr arrimood: meesha, sida loo koray, qaybta kalluunka aad iibsanayso, iyo sida loo maareeyay.
Qiimaha sare ee tuunadaani waxay ka timaaddaa xaqiiqda ah inay aad ugu baahan tahay Japan, gaar ahaan makhaayadaha sushi.
Inkasta oo tuna tuna ay tahay tan ugu qaalisan ee aadka loo dalbado, gaar ahaan cuntada, cilmi baaristu waxay muujisay in laga fogaado kharash kasta.
Akhri: 10 Isteek ee ugu Qaalisan Adduunka 2022
Bluefin tuna: Kalluunka aan caafimaadka qabin ee la cuno
Tuna Bluefin waa cunno caan ku ah dadka hodanka ah, gaar ahaan Japan iyo Mareykanka, kuwaas oo awoodi kara hilibka cas ee hodanka ah ee kalluunkan qaaliga ah. Waxay ku jirtaa liisaska maqaayado heer sare ah sida Nobu ee Los Angeles iyo Zawa Japanese ee Magaalada New York.
Si kastaba ha ahaatee, marka xigta ee aad ku aragtid kalluunkan qolofleyda ah ee dhifka ah ee qiimaha leh, laba jeer ka fikir intaadan cunin.
Maadada meerkurida sare ee tuna tuna oo ah buluugga ayaa ah sababta kaliya ee loo tixgeliyo kalluunka ugu caafimaadka badan in laga cuno tobanka kalluun ee ugu qaalisan. Mercury waa biro sun ah oo u keeni karta dhibaatooyin kelyo iyo habdhiska neerfaha haweenka uurka leh iyo carruurta.
Dhanka kale, tuna tuna, waa in si dhexdhexaad ah loo cunaa ama laga fogaadaa gebi ahaanba.
Marka laga reebo tuna tuna, waxaa jira kalluun kale oo qaali ah adduunka oo aad jeclaan lahayd inaad sahamiso.
Hadda, aan u galno si aan wax badan uga ogaano 10ka kalluun ee ugu qaalisan adduunka sannadka 2022.
10 kalluunka ugu qaalisan adduunka (2022) | Xaqiiqooyin caqli gal ah oo ku saabsan
1. Platinum Arowana ($ 400,000)
Kalluunka ugu qaalisan adduunka ee Platinum Arowana ayaa qiimihiisu ka badan yahay $ 400,000. Waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay bahal-biyoodka quraaradda sababta oo ah baaxaddiisa weyn, jir macdan ah, iyo ilkaha farta weyn leh.
Waxaa jirta odhaah ah Haddii aad nasiib u yeelato inaad indhahaaga saarto Arowanas, hodantinimo, nasiib, iyo barwaaqo ayaa si fudud kuu heli doonta.
XIDHIIDHKA: 10-kii ugu Qaalisanaa ee Corvette abid la iibiyo
2. Biyaha Dheeca Polka Dot Stingray ($ 100,000)
Kalluunka stingray waa kalluunka ugu qaalisan ee la cuno adduunka, waxaana lagu iibiyay illaa $ 100,000. Kalluunku aad buu qaali u yahay sababtoo ah dhoofinta Brazil hadda waa mamnuuc.
Kalluunkan wuxuu leeyahay jir-qaabeeya oval oo leh dhibco cad dushooda iyo hoosta cawl oo aan lahayn dhibco.
3. Peppermint Angelfish ($ 30,000)
Peppermint Angelfish waa kalluunka ugu qaalisan adduunka. Waxay magaceeda ka heshaa peppermint macaan, oo lagu yaqaan quruxdeeda gaduudka iyo caddaanka ah. Jidhka kalluunku muuqaal ahaan waa casaan-liimi, lehna xariijimo cad oo toosan.
Waxay gaaraan cabbirka ugu sarreeya oo ah 3 inji, oo hadda waxaa jira hal sawir oo Peppermint angelfish ah oo ku yaal Maraykanka.
4. Angelfish wajiga duuban ($ 20,000)
Angelfish-duubku wuxuu leeyahay jidh baraf cad leh iyo maaskaro madow oo aad u qurux badan, taasoo ka dhigaysa mid aad u qurux badan. Kalluunkan waxaa cilmi ahaan loo yaqaan Centropyge Venustus.
Biyaha waqooyiga jasiiradaha Hawaii waxay hoy u yihiin kalluunkan kulaylaha badda. In kasta oo aan dabiiciyan badnayn, haddana deegaankooda waxaa lagu soo rogay mamnuucid kalluumeysi ganacsi, sidaas darteed dhowr tijaabo oo kaliya ayaa geeya suuqa furan. Tani waa sababta kalluunkan uu qaali u yahay.
Sidoo kale akhri: 10 -ka Fiski ee ugu Qaalisan Adduunka 2022 -ka
5. Bladefin Basslet ($ 10,000)
Basslet -ka Bladefin waa kalluun yar oo leh qiimo aad u weyn!
Tani qayb ahaan waa sababta oo ah baastooyinku waxay ku noolyihiin reefs aad u qoto dheer, kuwaas oo qaarkood ay ka qoto dheer yihiin 500 fuudh, taasoo ka dhigaysa mid aad u adag in la goosto. Submersibles -ka ayaa ah habka kaliya ee lagu soo ururin karo kalluunkan yar ee badda ee quruxda badan leh, taas oo iyaga ka dhigaysa kuwo qaali ah.
6. Basslet Golden ($ 8,000)
Basslet -ka Dahabka ah waa jawharad biyood aad u qurux badan oo naadir ah oo leh sumad u dhiganta. Qiimaha oo dhan waa $ 8,000.
Haddaba, muxuu qiimihii $ 8,000 ee kalluunkan oo kale u yahay kharash aad u badan? Dhinaca kale, kalluunkan, ayaa ku nool biyo aad u qoto dheer oo u baahan doona in la keeno dusha sare iyada oo la adeegsanayo farsamooyin kala -goyn oo adag.
XIDHIIDHKA: 15ka Siyaabood ee Ugu Sareeya ee Go'aano Wanaagsan lagu Gaadho
Basslet -ka Dahabka ah, dhanka kale, way fududahay in la hayo oo si fiican ula qabsada maxaabiista.
7. Neptune Grouper ($ 6,000)
Kalluunka Neptune Grouper wuxuu ku nool yahay qoto -dheer aan caadi ahayn oo ah 260 illaa 800 fuudh, iyo geedi -socod kala -goyn ah oo gaar ah ayaa lagama maarmaan u ah in si ammaan ah loo keeno dusha.
Waxaa la yaab leh, in kasta oo ay ku qiimaysan yihiin $ 6,000, haddana kalluunkan ayaa si joogto ah loogu arkaa suuqa.
8. Australian Flathead Perch ($ 5,000)
Australian Flathead Perch, oo ka mid ah tobanka ugu sarreeya kalluunka ugu qaalisan, ayaa ka mid ah Basslets -yada ugu dhif iyo naadir yar. Xariijimaha buluugga ah ee jidhkooda ayaa sidoo kale leh gees madow. Waxay leeyihiin dhakada qalloocan iyo af weyn, muuqaalkoodana aan caadi ahayn wuxuu ku kasbadaa magaca Rainford.
9. Kalluumeysiga Birta ee Kalluunka ($ 2,700)
Balanbaalis Kalluunka Birta ah ayaa si fiican loogu yaqaan qaababka jirka iyo midabbada quruxda badan. Waxay ku raaxaystaan ​​u guuritaanka laba -labo ama kooxo yaryar. Marka uu kalluunku aad u tiro badan yahay, mar walba way ammaan yihiin sababtoo ah ma jiro bahal wax ugaarsan kara.
Akhri: 10 Baabuurta Ford Ugu Qaalisan Dunida
10. Clarion Angelfish ($ 2, 500)
Clarion Angelfish waa mid ka mid ah tobanka kalluun ee ugu qaalisan adduunka, waxaana inta badan laga helaa biyaha cusbada. Jidhkoodu waa jaale lehna xariijimo buluug ah oo dhalaalaya oo hoos u sii dhacaya dhererkooda iyo wejigooda.
Sidoo kale baalasha kalluunkan waxaa lagu xardhay buluug cad. Kalluunkaan ayaa badiyaa lagu soo qaadaa maxaabiis ahaan Bali, qiimahooduna wuxuu u dhexeeyaa $ 2,500 illaa $ 7,000 taas oo ku xidhan helitaanka waqtiga, marka la barbar dhigo kalluunka kale ee ugu qaalisan qaybtan.
Sida aad arki karto, kalluunku wuxuu ku yimaadaa qurux iyo midab kala duwan. Goobaha biyaha ayaa hoy u ah kalluunno kala duwan oo dhif iyo naadir ah. Waxaad baratay 10ka kalluun ee ugu qaalisan adduunka 2022.
Aan ku weydiiyo tan: haddii aad kala dooran lahayd mid ka mid ah tobanka ugu sarreeya kalluunka ugu qaalisan, kee baad dooran lahayd?
10 Cunnooyinka Ugu Qaalisan Dunida
10 Qoryaha Ugu Qaalisan Dunida
Isteekooyinka Ugu Qaalisan Dunida 2022
10 Khamriga Ugu Qaalisan Dunida
Sida Lacag Loogu Sameeyo Skyrim 2022 | Tilmaan Buuxo
Immisa ayay ku kacaysaa Qareenka Hayntu?
Hadafka ugu dambeeya ee waalidku waa inay eegaan danaha ubadkooda. Inta lagu jiro furiinka ama sharciga…
10-ka Qalin ee ugu Qaalisan Adduunka 2022
Wakhtigan iyo waayahaan, qalinku wali waa ku haboon yahay in la qoro qoraal inta lagu jiro…
Sida Si Fudud Loogu Iibsado BTT (BitTorrent coin)
Ma doonaysaa inaad barato sida loo iibsado qadaadiic BTT (BitTorrent) si fudud? BitTorrent, oo ka duwan inta badan lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' ee…
Sidee Klarna lacag u samaysaa: Klarna Business Model
Waxaa soo badanaya oo aad u badan in dadku ay hadda iibsadaan oo ay hadhow bixiyaan marka ay wax iibsadaan...
17-ka Pizza ee ugu Qaalisan Adduunka
Pizza-ku quruxdeeda waa saxan aad loo jecel yahay oo laga helo asal Talyaani, saxan Neapolitan ah…